Oge eruola itinye oge agha gị | Martech Zone
Enwere ihe dị iche n’etiti onye na-ere ahịa na onye ọ kacha nso. M kwere na m bụ oké onye na-ere ahia, ma egwu nso. Amaara m na m rere ọtụtụ nnukwu nkwekọrịta, ma ọ bụghị m bụ onye na-agba mbọ ink (nkwekọrịta nkwekọrịta). Enweghị m mmasị ịlaghachi azụ na nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ itinye nrụgide maka atụmanya ịbanye na mbụ. Obi dị m ụtọ, ndị ọkachamara gbara m gburugburu na-arụ ọrụ na-atọ m ụtọ.
Ndị anyị na-emechi emechi nwere ike ịmata ngwa ngwa ohere ndị nwere onye ahịa, uru nke ngwa anyị, ma tinye nrụgide dị mkpa iji mezue ire ere ahụ. Nke ahụ nwere ike ịdị ka nhịahụ - Ekwenyere m ma ọ bụrụ na echeghị m na anyị na-agbanwe ndị ahịa anyị ihe ịga nke ọma.
Anyị achọpụtala na ibu njikọ ahụ na ngwa ngwa anyị malitere, ngwa ngwa nloghachi na itinye ego maka onye ahịa anyị - yabụ anyị nwere obi ụtọ ogologo oge. Anyị achọpụtakwala ndị na - abụghị - ndị ahịa pere mpe anyị chọrọ ka elebara anya na nsonaazụ anaghị abịa ngwa ngwa. Nnukwu onye ahịa nwere ike ịhụ uru na izu, obere onye ahịa nwere ike were ọnwa.
Na arọ nke nlaazu n'ụzọ zuru ezu anyị, anyị na-aka na ụlọ ọrụ ndị nwere dollar imechi afọ, ma n'ezie nwere na-amanye ịtụkwasị anyị obi na ha ego. Ndị ụlọ ọrụ agaghị achọ imefu ego ọ bụla ma tinye ihe ọghọm karịa itinye ego na ohere nke ịtụfu ya.
Nke a bụ mgbe ịchọrọ a nso. Onye nọ nso adịghị iri ahịa iji nweta ire, ha tinye nke ha agha ihu ma maa atụmanya ahụ aka ịkwụsị ire ahụ.
Izu a ka m hụrụ ya n’ọrụ. Anyị na-arụ ọrụ na atụmanya ga-erite uru site na ikpo okwu ntanetị anyị, mana ha na-adọkpụ ụkwụ ha na ịbanye. Nkwekọrịta nkwekọrịta bụ akụkụ dị nta nke mmefu ego ha niile n'ihi ya ọ bụ ihe na-enweghị atụ. Nloghachi na ntinye ego ga-abụ ọtụtụ okpukpu karịa mgbalị ndị ọzọ.
Anyị nso anyị na ya agha ihu aba agha. Ọ nyochara atụmatụ ha ugbu a wee cheta atụmanya na ha etinyeworị oge na ume dị ukwuu n'ime atụmatụ nke ewetaraghị ha nsonaazụ… nada… na na anyị bụ ndịiche. The nso hapụrụ mkparịta ụka na nri ajụjụ, “wish chọrọ ịnọgide gị okpu atụmatụ, ma ọ bụ itinye ego na a na-emeri atụmatụ na anyị?”. Mechie!
Da na-ada ụda, mana oge ndị a siri ike. Ieslọ ọrụ na-agwụ ha 2008 Amawaputan ugbu a ka i wee placated na ahịa na-abịa n'ụzọ gị na nlaazu na abụghị nnukwu ihe.
Na 2009, ị ka mma itinye agha gị n'ihi na ị ga-alụ ọgụ maka ego mmefu ego nke nwere ike ghara ịdị! Jide n'aka na ị ga - ewe ndị ọrụ imechi - ọ bụghị ndị na - ere ahịa - ị nwere ike ị pụta n'enweghị nsogbu. Onyinye nke ndị ọrụ anyị bụ nnukwu akụkụ nke ihe na-eme ka ndekọ ndekọ anyị ugbu a wee nye anyị uto na-aga n'ihu na 2009.
Tags: mmechijaket igwe zuru ezuatụmanyankwukọrịta ahịaNkwado ire ahịaagha ihu
Dee 22, 2008 na 12: 38 AM
Ikekwe ọ ga-aka mma ịmachikwu ekike agha dị ka agha karịa ihu agha nke ga-atụ ndị ahịa ụjọ. Imechi ekwesịghị ịbụ ihe na-egbu mgbu maka onye ahịa ya.
Dee 22, 2008 na 12: 49 AM
Ekike agha agaghị enyere aka mechie ire ere, SBM! Achọghị m ka atụmanya na-atụ ụjọ ma ọ bụ na-atụ ụjọ. Egwu bụ mmụọ na - akpọnwụ - ọkachasị na azụmaahịa.
Kama, Achọrọ m ka obi sie ha ike. Nsogbu anyị na-ahụ na akụnụba a bụ na azụmaahịa na - egbochi - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ kacha dịrị ha mma ịga n’ihu. Ahịa agha agha site na egwu ahụ.
Daalụ maka ịgbakwunye na mkparịta ụka ahụ.
Dec 22, 2008 na 4:04 PM
Gosh o di nma inu ka mmadu na-ekwu maka azumahia ya na REAL world. Ihe m na-anụ bụ Twitter nke a, na FriendFeed na, na ahịa site na mgbasa ozi mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ. Nye m ezumike, ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na Twitter, dị ka ụlọ ọrụ nwere ngwaahịa ịre, ị kwesịrị ịghọta usoro ahịa ahụ site n'otu njedebe gaa na nke ọzọ, nke ahụ gụnyere imechi, na mmechi bụ nka, ebe ị enweghị ike ịtụ egwu. Cheta, ihe kachasị njọ ha nwere ike ikwu bụ ee, na nke ahụ bụ otu karịa nso EE.
Dec 22, 2008 na 4:28 PM
Daalụ Preston! Ikwuru eziokwu - ọ bụ maka itinye ego gị kachasị mma ebe a kacha chọọ ha.
Dec 22, 2008 na 6:08 PM
Ajuju m na ndi ahia nile putara bu Seth Godin bu gini ka aga eme iji zuo ahia ahia ahia gi nke g’abia obere ahia di n etiti obodo? Ugbu a, ka m nye gị ihe ndabere banyere m, arụrụ m ọrụ na Ọrụ Ọrụ Ego maka ihe dịka afọ 17 na NYC. Ọrụ m bụ kpọmkwem iji nweta ego na ijikwa ya. Enwetara m nde mmadụ jisiri ike site na ụzọ abụọ: nzukọ ọmụmụ ihe maka ndị na-etinye ego n'otu n'otu, na ndị isi na-akpọ ndị isi nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ihu ọha. Akaụntụ m kachasị ukwuu bụ 45 nde… adịghị egwu. Ugbu a, enwere m ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ weebụ na-emepụta saịtị ndị na-efu ihe ruru $ 3,000 na karịa. Kedu ihe ga-abụ ndụmọdụ ga-enyere m aka izute ma mechie ọtụtụ ndị nwe ụlọ ahịa? Agbalịrị m ịkwụ ụgwọ kwa Pịa, abaghị uru. Nkparịta ụka mmekọrịta mmekọrịta… ee ziri ezi, nke ahụ bụ ihe m na-akpọ G to G (Guru to Guru). Ikpo oyii ewetala ihe ruru ndi ahia m nile, ewezuga okwu onu. Nye m ihe ọhụụ na nke ọhụrụ nt.
Dec 22, 2008 na 6:14 PM
Oops, biko gbaghara na "ha" typo… kwesịrị "e"